Nei Sarudzo dzeUNWTO Dzichifanirwa Kuve Kunetseka Nekukurumidza kune UN uye Vakuru veNyika?
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Trending Now » Nei Sarudzo dzeUNWTO Dzichifanirwa Kuve Kunetseka Nekukurumidza kune UN uye Vakuru veNyika?
Nhau Nhau • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • wedzero • Hurumende Nhau • nhau • Kuvakazve • Spain Kuputsa Nhau • ushanyi • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Dai kusave kushanya kunoendesa coup de grace kuUN system!
Tourism iri pakati pemufananidzo uyu nekuda kwezvikonzero zviviri.
Coup de grace kune UN system
Denda iri ranetesa hurongwa hweUnited Nations, richifarira kubuda kwemitemo kunyanya, kana kusiri chete, yakanangana nenyika.
Sangano reWorld Trade Organisation, rakatarisana nechikumbiro cheIndia neSouth Africa kuti risunungure kugadzirwa kwemishonga, harina charinokwanisa kuita nezvazvo kunyangwe paine rutsigiro rwakakura rwenhengo dzaro, nekuda kwekubvumirana kwavo.
World Health Organisation yanga iri chinangwa chekushoropodzwa uye kurwiswa, midzi yaro inogona kuteverwa kumatambudziko ezvematongerwo enyika edzimwe nhengo dzayo.
Kushevedzera kwekudzivirira kwevanhu vakawanda munyika dzine mari shoma kwawira pasi panzeve dzisinganzwe. Huwandu hunoratidza kuti nyika shanu kana gumi dzakabaya 75 kana 80% yehuwandu hwadzo, yaramba yakagadzikana kwemwedzi yakawanda kunyangwe ichiwanzorangarirwa seisingagamuchirwe neSecretary General wayo.
Nhasi, nhamba iyi yachinja, zvakare nekuda kwekufambira mberi mune dzimwe nyika dzine vanhu vakawanda, asi mamiriro eAfrica anoramba achinetsa, sekuyeuka kwakaita Mutungamiriri wesangano reAfrica.
Zvikumbiro zveMunyori Mukuru weUN hazvina kumbofamba zvakanaka.
Nekune rumwe rutivi, zviziviso zvemapoka enyika dzakapfuma uye/kana dzakawanda dzakasimukira pamisangano yavo yenguva nenguva zvakanyorwa, izvo chete munhu ane tarisiro ane ruzivo rwokuzviwanira anogona kuongorora seane hanya nezvinetso zvenyika dzisati dzakasimukira.
Nekuda kwedenda, izvi zvimwe zvakafarira kubuda kwemhando itsva dzehutachiona.
Mhedzisiro shoma kwazvo yeCOP26 chimwe chiratidzo chenguva isina kunaka yekugarisana pasi rose.
Nekudaro, kune zvikonzero zvakawanda zve geopolitical zvekusimbisa hukama hwenyika. Zvinosanganisira kutengeserana, kutama, kugadzikana kwedunhu, uye hupfumi hwenyika, hwakakanganisika, zvisinei nenzvimbo uye nechikamu zvisina kuenzana, nedenda.
Chekutanga ndechekupa kwayo kuGNP yenyika. Denda risati rasvika, raive rakatenderedza 10%, uye ikozvino rakaderedzwa kusvika pa5%, nekukanganisa kwakananga pakushandisa uye pachikamu chepamusoro. Kudzoreredza kwaro kuri pahurongwa hwehupfumi hwenyika dzese, asi kune dzimwe nyika, zvakakosha, sezvo hupfumi hwadzo huchida kutsamira mumwe chete, paine mupiro kuGNP yavo inosvika makumi matatu muzana.
Izvi zvinoita kuti zvive zvakakosha kuti sangano ravo repasi rose rive rakasimba uye rinonzwa kune akasiyana matambudziko anounzwa neindasitiri iyi zvichienderana nehunhu hwenyika. Zviri nyore kupa zano kune nyika dzakaita seRussia kana United States, kana kunyange nzvimbo huru dzekushanya dzeEurope, kutsigira kushanya kwemumba, asi zvingave zvisina musoro kufunga kuti chiyero chakadaro chinogona kushandira nyika dzakaita seSeychelles, Saint Lucia, kana. Fiji.
Asi panguva ino, kushanya kunogonawo kuve chinhu chakakosha pakugadzikana kwehurongwa hweUnited Nations nekuda kwemamiriro ezvinhu - iri kuuya General Assembly yeUNWTO, World Tourism Organisation.
Pahurongwa hwayo kugadzwa kwaSecretary General kwemakore mana anotevera.
Mune makakatanwa eExecutive Council, maSecretary Generals maviri akambonzi akashandiswa kubvisa makwikwi emushandirapamwe.
Chikumbiro cheMutungamiriri weDare reKugadzazve Zurab Pololikashvili chinofanirwa kubvumidzwa ne2/3 yeNyika dzeNhengo dzinopinda Musangano Mukuru.
Ichi chinodiwa chinobva pamutemo, wakagadzwa muna 1978 muBuenos Aires, iyo inogadzirisa mamiriro maviri ekusarudzwa kweMunyori Mukuru nevakawanda vanokwanisa uye vhoti yakavanzika.
Mitemo miviri iyi inoenderana nemamiriro ezvinhu. Kana mumwe akabvunzwa, hapana chikonzero chekufunga kuti imwe yacho ndeyepamusoro uye haigone kubvunzwa.
Izvi zvinoratidza kudzivirira nekuvaremekedza sechivimbiso chekuchena kwemabasa akakosha esangano reUnited Nations. Zvisineyi, manyepo epadandemutande aburitsa padandemutande resangano resarudzo sekungotsikiswa, uye mukukokera musangano unotevera, zvayeuchidzwa kuti inenge iri tsika yekusavhota muchivande kunze kwekunge nyika isingazvibudisi pachena. zvikumbire.
Zvakare, matauriro asingatyisidziri ayo mamiriro ekutadza kutonga kwesangano pachiitiko chekusatenderwa akatsanangurwa anogona kusiya kuvhiringidzika muverengi asina ruzivo.
Hakusati kuri here kuti avo vanoshuva kusiya mutemo uripo kuti vatore mutoro uye vaise zviso zvavo mberi nokukumbira rumbidzo?
Izvi zvinoda kuti kuvepo Mutungamiriri weMusangano, saka zvave nyore kuti Secretariat irangarire tsika yekukanganwa kuti paivewo nerumwe rutivi rwekubviswa kwevamiriri, izvo kune anonyora, aimbove mukuru weUNESCO akadana ndangariro ivowo vasina tsitsi. kubviswa kwemumiriri weLatin America chete musarudzo dze2017 UNESCO.
WTN Advocacy Committee Gakava
Kukwikwidza kwakakurudzirwa ne Executive Board nhasi yanga iri nyaya yegakava, rakarongwa neWorld Tourism Network (WTN) Advocacy Committee, yandakapinda.
Yakanga iri nharo yakanyatsonaka, umo kudiwa kwekusarudzwa kweMunyori Mukuru weUNWTO kuti ave nechokwadi chekujekesa uye kuvimbika kumitemo inosunga vose vashandi vehurumende yeUN yakakunda.
Izvi zvinofanirwa kuda kujekeswa kwezvirevo zvekupedzisira zvinoshungurudza (zvinhu 48-50) zveEthics Officer's Annual Report, apext 1 kuHuman Resources Report, uye nemafambisirwo akaitwa chirongwa chesarudzo chiri pamutemo chemumiriri anokurudzirwa. akakweverwa kune imwe nzira yekusarura muchirongwa chekushanya kwake zviri pamutemo, kunyanya muna 2019, nyaya iyo nyika dzenhengo dzakakanganikwa neUNWTO dzingangove nehanya.
Rimwe rematambudziko angangokanganisa mhedzisiro yevhoti nderekuti wafunga (zvaive musimba rayo here?) kuti mushure mekuzivisa kweMorocco kusakwanisa kuita musangano nekuda kwedenda (diki muMarrakech, zvakakodzera kujekeswa) , zvakafanana zvaizoitwa muMadrid, tichiregeredza kupihwa kweKenya, iyo kubva pakuona kwesangano haina kupa matambudziko uye kubva padenda iri mumamiriro ezvinhu ari nani kupfuura Madrid.
Kune vamwe vanofunga kuti izvi zvinofadza munhu anenge akurudzirwa, asi izvi hazvingadaro kana zvinhu zviviri zvikazadzikiswa, imwe yekugona kweGeneral Conference: kubvuma kuti musangano wepachivande unosarudzwa Secretary General unogona kunge wakasanganiswa, chiso nechiso - chinobatika, chinovimbisa kuvanzika kwevhoti, uye kumwe kugona kwenhengo dzenhengo.
Sarudzo ine gakava haigone kuparadza UNWTO chete asi zvakare kuendesa coup de grace kuUnited Nations system.
Iyi haisi nyaya yeVashandi veKushanyirwa uye kunyange zvishoma kune vamiriri venyika dzakamiririrwa muMadrid, asi kune avo vane masimba ekutonga.